New Creation ၏ DNA - Worldwide ဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2020-04 > အသစ်သောဖန်တီးမှု၏ DNA ကို
ပေါလုသည် သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် သင်္ချိုင်းတော်မှ ထွက်လာပြီး ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်၏ အဦးသီးများဖြစ်လာသောအခါ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤသို့ပြောပြသည်– “ယခုမူကား ခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှ ထမြောက်တော်မူပြီ၊ အိပ်ပျော်သောသူတို့၏ အဦးသီးသောအသီး၊ "(1. ကောရိန္သု ၁5,20).
ဤသည်မှာ ကမ္ဘာဦးကျမ်းတွင် သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ဘုရားသခင်မိန့်ဆိုခဲ့သော စကားနှင့် နီးကပ်စွာဆက်နွှယ်နေသည်– “ထိုအခါ ဘုရားသခင်က ဤသို့မိန့်တော်မူခဲ့သည်– “မြေကြီးသည် မျိုးစေ့ကို ပေါက်စေသော မြက်ပင်များ၊ အသီးအနှံများကို မြေကြီးပေါ်၌ အသီးအသီးအသီးအသီးအသီးအသီးအသီးတို့ကိုသီးစေ။ ဝက်ဝံသည် အဘယ်သူ၏အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သနည်း။ ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်” (1. ကြွက် 1,11) ။
ဝက်သစ်ချပင်တွေပေါ် ပေါက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးပင်တွေက ခရမ်းချဉ်သီးတွေထွက်လာတဲ့အခါ ဒီအကြောင်းကို နှစ်ခါမတွေးပါဘူး။ ၎င်းသည် အပင်တစ်ပင်၏ DNA (မျိုးရိုးဗီဇအချက်အလက်) တွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆင်ခြင်ခြင်းမှလွဲ၍ သတင်းဆိုးမှာ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး အာဒံ၏ DNA ကိုယူကာ အာဒံ၏အသီးကို အမွေဆက်ခံခြင်း၊ ဘုရားသခင်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် သေခြင်းတရားကို ငြင်းပယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ဘုရားသခင်ကို ငြင်းပယ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းကို လျှောက်ရန် သဘောထားရှိသည်။
သတင်းကောင်းမှာ “အာဒံ၌ လူအပေါင်းတို့သည် သေသည်နည်းတူ၊ ခရစ်တော်အားဖြင့် လူအပေါင်းတို့သည် အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ရောက်ရကြလိမ့်မည်။”1. ကောရိန္သု ၁5,22) ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ DNA အသစ်ဖြစ်ပြီး၊ ဤအရာသည် ယခုပင် အသီးအနှံဖြစ်သည်– “ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းအသီးအနှံနှင့် ပြည့်စုံ၍ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို ချီးမွမ်းခြင်းအလို့ငှာ” (ဖိလိပ္ပိ၊ 1,11) ။
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ိညာဉ်တော်နှင့်ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏အစိတ်အပိုင်းအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်၏ကြင်နာမှုအရအသီးအနှံများကိုမျိုးပွားကြသည်။ ယေရှုသည်မိမိပုံသဏ္evenာန်ကိုစပျစ်နွယ်ပင်အဖြစ်ပင်အသုံးပြုသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့သည့်အသီးများနှင့်အသီးကိုသီးသောအကိုင်းအခက်များအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်
“ငါ၌နေကြလော့။ စပျစ်ပင်၌မတည်လျှင် အကိုင်းအခက်သည် အလိုလိုအသီးမသီးနိုင်သကဲ့သို့၊ သင်သည် ငါ့၌မတည်လျှင်၊ ငါသည် စပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်၏။ အကြင်သူသည် ငါ၌တည်၏။ ငါမှတပါး အဘယ်အမှုကိုမျှ မတတ်နိုင်။” (ယော၊ ၁5,4စာ-၅)။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖန်တီးမှု DNA အသစ်ပါ။
မကောင်းသောနေ့ရက်များ၊ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်နှင့်ရံဖန်ရံခါထိမိလဲစရာများရှိသော်ငြားဒုတိယဖန်တီးမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်သင်သည်“ ၎င်းမျိုး” မှအသီးများကိုသီးလိမ့်မည်ဟုစိတ်ချနိုင်သည်။ သင်၌ရှိသောယေရှုခရစ်၏အကျိုးတော်သည်သင်၌ရှိ၏။